आज मुम्बई र दिल्ली भिड्दै, कसको पल्ला भारी ? - Kohalpur Trends
२० कात्तिक, काठमाडौं । इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल)को क्वालिफायरमा मुम्बई इन्डियन्स र दिल्ली क्यापिटलबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । जारी आईपीएलको क्वालिफायर–१ आज साँझ ७ः४५ बजे दुबई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा सुरु हुन लागेको हो ।
कूल १६ अंक जोडेको दिल्ली अंक तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ । दिल्लीले ८ म्याचमा जित निकाल्यो भने ६ म्याचमा पराजित भयो ।
समूह चरणको दुवै खेलमा मुम्बईले दिल्लीलाई स्तब्ध पारेको थियो । पहिलो म्याचमा १६३ रनको लक्ष्य पछ्याएको मुम्बईले दिल्लीलाई पाँच विकेटले पराजित गरेको थियो । दोस्रो म्याचमा दिल्लीलाई मुम्बईले नौ विकेटले हराएको थियो ।
Previous Previous post: असाध्यै भाग्यमानी हुन्छन यि राशि हुने मानिसहरू, हेर्नुहोस तपाई कुन राशि?
Next Next post: १४ वर्षदेखि सिंगै पहाड सिँगार्न लागिपरेका ‘अछामी बड्डा’ आफ्नो घर बेचेर आएको १ करोड बढी रकम उनले यहीँ खर्चिँदैछन्
सीसीएमसीको निष्कर्ष : उपत्यकामा कोरोना उच्च जोखिम, निषेधाज्ञा भने नलगाइने
trendsminad November 24, 2020	No Comments
९ मंसिर, काठमाडौं । कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समिति (सीसीएमसी) ले काठमाडौं उपत्यकामा कोरोना संक्रमणको जोखिम उच्च रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । उपत्यका नगरपालिका फोरमले माग…
९ मंसिर, काठमाडौं । गत कात्तिक पहिलो साता सांसदहरुले दसैं भत्ता लिएको समाचारले धेरैको ध्यान तान्यो । यो विषयलाई सामाजिक सञ्जालमा बहसको विषय बनाउन पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत…
एजेन्सी । भारतकी चर्चित कोरियोग्राफर एवं फिल्ममेकर फराह खान तीन सन्ताकी आमा हुन् । उनले आफु ४३ वर्षकी हुँदा आमा बन्ने निर्णय लिएकी थिईन् ।…
एजेन्सी । संसारकै मोटो बालक आर्या परमानाले आफ्नो वजनको धेरै भाग घटाएका छन् । उनले कडा मेहनत गरेर १०८ किलो तौल घटाएका हुन् । उनको…
trendsminad November 24, 2020 No Comments